ဒါတွေမြန်မာပြည်ကစခဲ့တာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒါတွေမြန်မာပြည်ကစခဲ့တာ
Posted by nature on May 15, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
Nature ရဲ့ မြန်မာပြည်ကစခဲ့တာ
-ဟာသလေးပါ ကျောက်သင်ပုန်းတဲ့-ဆိုတဲ့ post မှာ comment ပေးရင်းစိတ်ကူးရလို့ ရေးလိုက်တာပါ၊ မူပိုင်ခွင့်တွေဘာတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ပါ၊ မြန်မာတွေမညံ့ဘူးဆိုတာသိစေချင်တာတခုတည်းပါ။ ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာဆိုတာနဲ့ အထင်အမြင်သေးကြတယ်၊ ဒါတွေဟာ မြန်မာပြည်းသား တွေကစခဲ့ပြီးကမ္ဘာကျော်နေတဲ့အားကစားအကြောင်းပါဘဲ။
ငယ်ငယ်တုန်းကကစားခဲ့ဘူးတဲ့ ဘောလုံးရိုက်ကစားနည်းတခုပါ၊ ၁ဖွဲ့မှာ အနဲဆုံး ၃ယောက်ရှိရတယ်၊ အဖွဲ့၂ဖွဲ့ခွဲပြီး၁ဖွဲ့ကဘောလုံးပစ်ရတယ်၊ တဖွဲ့ကဘောလုံးကိုရိုက်ရတယ်၊
ဘောလုံးပစ်တဲ့သူကဘောလုံးရိုက်တဲ့သူနောက်က ထင်ရူးပုံးကိုထိအောင်ပစ် (သို့) ထင်ရူးပုံးနောက်က ကိုယ့်လူဆီကို ဘောလုံးရိုက်တဲ့သူ ရိုက်မမှီအောင် အမြောက်ပစ်(ခပ်မြင့်မြင့်)ပေးရပါတယ်၊
တဖက်အဖွဲ့က ထင်းရူးပုံးကိုထိအောင် ပစ်တဲ့ဘောလုံးကို ဘောလုံးရိုက်တဲ့သူက ထင်းရူးပုံးကိုမထိအောင် ဘတ်တံနဲ့ရိုက်ထုတ်ရပါတယ်၊
ဘောလုံးဟာ ဘတ်တံနဲ့ရိုက်မိလို့လွင့်သွားရင် ဘောလုံးလိုက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာ ရိုက်လိုက်တဲ့သူက ပစ်တဲ့စည်းနဲ့ ထင်းရူးပုံးနေရာကို ရသလောက်အသွားအပြန်ပြေးရပါတယ်၊
ဘောလုံးကောက်ပြီး အဲဒီပြေးတဲ့လူကိုစည်းမရာက်ခင်ထိအောင်ပစ်နိုင်ရင် ဘောလုံးရိုက်တဲ့သူသေပြီးနောက်တယောက်လဲရပါတယ်၊
ဘောလုံးရိုက်တဲ့သူက ၅ခေါက် ပြေးနိုင်ရင် တယောက်ရှင်ပါတယ်၊
ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကတည်းကကစားခဲ့တာပါ၊ အခုအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာသိနေတဲ့ cricket ,Baseball ကစားနည်းတွေနဲ့အတော်ကိုဆင်တူပါတယ်၊
နောက်တခုကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကခုထိ မြန်မာပြည်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ဘောလုံးကစားနည်းတခုပါပဲ၊ ဘောလုံးဂိုးကျဉ်းကစားနည်း ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အခုအခါ ကမ္ဘာမှာလည်း ဂိုးကျဉ်းကစားနည်း ကစားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်၊
တစ်ခြားကစားနည်းတွေထက် ဘောလုံး ဂိုးကျဉ်းကစားနည်းကိုတော့ မရိုးနိုင်ဘူးဗျို့….
မော်တော်ကား ဂီယာတံကို တုတ်နဲ့ ထောက်ပြီးမောင်းတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိဘူးတဲ့ အဲဒါလည်း မြန်မာပြည်က စတာဗျ
(သဂျီးလေသံနဲ့ ပြောလိုက်မယ်) မြန်မာတွေ အဂ္ဂိရတ်မှာတင် ကျန်ခဲ့ပြီး အနောက်တိုင်းက ဓာတုဗေဒဆိုပြီး သေသေချာချာလေ့လာသလို၊ မြန်မာတွေက အားကစားနည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အထိ လုပ်ခဲ့လို့လား။
အခု လုပ်နေပါပြီ ဆီးဂိမ်းမှာ မြန်မာစစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲကို ထည့်သွင်းဖို့အပြင်
ရိုးရာ ခြင်းအလှခတ် ပြိုင်ပွဲအတွက်လည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရေးဆွဲနေပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း ဆွဲနေတယ် …. ဘာလဲ ဆိုတော့ …အဲ ……
ကျီးသားရိုက်တာကို.. မြန်မာရှေးဘုရင်ခေတ်ကတည်းက ကစားနေတာမျိုး စာတွေမှာဖတ်ဖူးတယ်..။
ဘောလုံးက .. အင်္ဂလန်က စတာဖြစ်ပြီး.. မြန်မာတွေကစားတဲ့ ဂိုးကျဉ်းကစားပုံမျိုး.. တောင်အမေရိကတိုက်မှာ ကစားနေကြတာ တွေ့ဖူးတယ်..။ မြန်မာကစတာလို့တော့ ပြောရခက်မယ်..။
မန်းကျည်းရွက်နုကို ခူး ဖက်နဲ့ထုပ်။
ပြီးရင် ဘုတ်မရေဆီဆမ်းအော်လို့ ဖနောင့်နဲ့တက်ပေါက်။
တော်တော်လေးကြာရင် ပြန်ဖော် နွမ်းတော်မူနေတဲ့မန်းကျည်းရွက်ကို စားကြတာမျုိးရော ကစားဘူးပါသလား?
မန်းကျည်းစေ့ သြဇာစေ့ကို လက်ခုပ်ထဲထည့်
လက်ကလေးကာ ထားတဲ့ ရှေ့တည့်တည့်က ကျင်းတိမ်ထဲကိုပစ်ချ။
တစ်ဖက်လူပြတဲ့ ဟာလေးကို ကျင်းထဲဝင်အောင်တောက်။
၀င်သွားရင် ဆက်တောက် မ၀င်တော့ရင်ရပ်။
ကျင်းထဲမှာေ တာက်လို့ဝင်သမျှကိုယ်အပိုင်ရတဲ့ ကစားနည်းရော ကစားဘူးပါသလား၊?
ဦးပေါက်ရေ အဲ့ဒီလို ကစားနည်း ကစားဖူးတယ်။ နောက် သွားကြားထိုးတံလို တုတ်ကို မြေမှာစိုက် သားရေကွင်းတွေစွပ်ပြီး ဖင်ဖူးထောင်းထောင်ပြီးမှုတ် ထွက်ကျလာတာ ကိုယ်အပိုင်။ မန်ကျီးစေ့ နဲ့ စုံမဖွက် ၊ မန်ကျီးစေ့နဲ့ ဇယ်ခုတ် စုံနေတာပဲ ကစားတာ။ မန်ကျီးစေ့တွေကို အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလို သဘောထားပြီးသိမ်းရတာလေ ငယ်ငယ်တုန်းကပြောပါတယ်။
ွှအဲဒါ ဇယ်တောက်တာလေ၊ဇယ်ခုပ်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်၊ ငယ်သူမို့မသိပါ အရင်တုံးက ရုပ်ရှင်မှာ မို့မို့မြင့်အောင် ဇယ်ခုပ်ပြတာကျွမ်းမှကျွမ်း၊ထုပ်ဆီးတိုးတာတော့ အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းရှိတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ။
( မြန်မာတွေက အားကစားနည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အထိ လုပ်ခဲ့လို့လား။)…
မမ ရေ-အားကစားနည်းတခုကိုကမ္ဘာကလက်ခံဘို့ အောင်မြင်ဘို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး၊ ငွေကုန်ခံနိုင်ယုံမက နည်းပညာလည်းမြင့်ဘို့လိုပါတယ်၊ လူရိုသေရှင်ရိုသေလိုလူမျိုးက ငွေကုန်ခံနိုင်ပြီး နည်းပညာရှိရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်၊ အောင်မြင်သွားရင်ချမ်းသာနိုင်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုစွန့်စားမဲ့လူမျိုးမရှိပါဘူး၊ စွန့်စားဘို့လဲစိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး၊ အောင်မြင်မှုတခုဆိုတာရရှိဘို့ ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုရှိရပါတယ်၊ မြန်မာပြည်သားတွေကအပျော်ဆော့ဘို့ စိတ်ကူးသက်သက်ပါ။ ဘာပဲပြောပြော ကမ္ဘာ့အားကစားနည်း မဖြစ်ခင်ကတည်းက ၁၀နှစ်၊ နှစ်၂၀လောက် မြန်မာပြည်မှာကစားခဲ့တာကတော့သေချာပါတယ်။
ဒါတောင်ကျန်သေးတယ်၊ တောက်ခုံတောက်တာကိုမြင်ပြီးတော့ဘိလိယက် ထိုးတာကိုထွင်ခဲ့တယ်၊ ကျောက်ဒိုးပစ်တာကိုမြင်ပြီးတော့ဂေါက်သီးဂိုက်တာကို ထွင်ခဲ့တယ်၊(ဘော်လုံးကလေးကိုတွင်းထဲရောက်အောင်ပစ်တာချင်တူတယ်)
ဒါတောင်ကျန်သေးတယ်၊ တောက်ခုံတောက်တာကိုမြင်ပြီးတော့ဘိလိယက် ထိုးတာကိုထွင်ခဲ့တယ်၊ ကျောက်ဒိုးပစ်တာကိုမြင်ပြီးတော့ဂေါက်သီးဂိုက်တာကို ထွင်ခဲ့တယ်၊(ဘော်လုံးကလေးကိုတွင်းထဲရောက်အောင်ပစ်တာခြင်းတူတယ်)
ဂူလီသဘင်ဆိုတဲ့ မြင်းပေါ်ကနေ သစ်သားလုံကိုး တုတ်နဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့ကစားနည်းကလည်း
ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်တော့ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ